Waa maxay badbaadadu? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Maxaan u noolahay Noloshaydu wax macno ah ma leedahay? Maxaa igu dhacaya markaan dhinto? Su'aalaha asalka ah ee qofkastaaba isweydiiyay intaba. Su'aalaha aan kaaga jawaabayo halkan jawaabta ay tahay inay muujiso: Haa, noloshu macno ayey leedahay; haa, nolol ayaa dhimasho jirta kadib. Majiraan wax ka badbaado dhimashada. Maalin maalmaha ka mid ah waxaan helnaa wararka naxdinta leh ee ah in qof la jecel yahay uu dhintay. Waxay si lama filaan ah noo xusuusineysaa inaan annaguna dhimanno berrito, sannadka soo socda ama nus qarni nus. Cabsida dhimashadu waxay kicisay ninka ku guuleystey Ponce de Leon raadinta isha hal abuurka dhalinyarada. Laakiin qofka wax iibiya lama eryi karo. Geeridu qof walba way ku timaadaa.
Maanta dad badan ayaa rajo ka qaba kordhinta nolosha sayniska iyo farsamada iyo horumar. Waa maxay dareen haddii saynisyahannadu ay awood u yeesheen inay ogaadaan farsamooyin noolaha oo dib u dhac ku keeni kara ama xitaa joojin kara gabowga Waxay noqon doontaa warka ugu weyn uguna xiisaha badnaa ee lagu soo dhoweeyey taariikhda adduunka.
Si kastaba ha noqotee, xitaa adduunkeena farsamada casriga ah, dadka badankood waxay ogaadaan in tani ay tahay riyo aan la gaari karin. Sidaas darteed inbadan ayaa ku dhagan rajada ah inay ka badbaadaan geerida kadib. Malaha waxaad ka mid tahay kuwa rajaynaya. Miyayna ahayn wax la yaab leh haddii nolosha aadanaha run ahaantii lagu qasbay ujeedo weyn oo kasta? Ujeeddada oo ay kujirto nolosha weligeed ah? Rajadaani waxay ku jirtaa qorshaha badbaadada Eebbe.
Xaqiiqdii, Ilaah wuxuu ku talajiraa inuu siiyo nolosha weligeed ah dadka. Ilaah, oo aan been sheegin, ayuu Rasuul Bawlos qoray, oo ballan qaaday rajo nolosha weligeed ah ... (Tiitos 1: 2).
Meel kale wuxuu qoraa in Ilaah doonayo in dadka oo dhan la badbaadiyo oo ay runta ogaadaan (1 Timoteyos 2: 4, tarjumaadda bilowga ah). Injiilka badbaadada, oo lagu wacdiyey Ciise Masiix, nimcooyinka bogsashada ee Ilaah ayaa u muuqday dadka oo dhan (Tiitos 2: 11).
Dembigu wuxuu dunida galay Jannada Ceeden. Aadan iyo Xaawa way dembaabeen, carruurtooduna way wada sameeyeen. Rooma 3: Bawlos wuxuu sharxayaa in dadka oo dhami ay dembi leeyahiin.
Mid xaq ahu ma jiro (Aayadda 10)
Mid wax weyddiiya oo Ilaah wax ka weyddiiyaa ma jiro (Aayadda 11)
Mid wanaag falaa ma jiro (Aayadda 12)
Cabsida Ilaah ma jirto (Aayadda 18).
... kulligood waa dambiilayaal mana hayaan ammaanta ay Ilaah ku lahaan karaan, ayuu yiri Bawlos (Aayadda 23). Wuxuu taxayaa xumaanta ka dhalanaysa kartida aan uga adkaaneyno dambiga - ooy kujiraan hinaaso, dil, sino galmo, iyo rabshad (Rooma 1: 29-31).
Rasuul Butros wuxuu ka hadlayaa itaal darrida aadanaha sida damacyada jidhka ee la dagaallama nafta (1 Butros 2:11); Bawlos wuxuu ku sheegayaa iyaga inay yihiin damac xumaan (Rooma 7:5). Wuxuu leeyahay ninku wuxuu ku nool yahay nolosha adduunyada wuxuuna ku dadaalaa inuu fuliyo doonista jidhka iyo caqliga (Efesos 2: 2-3). Xitaa samaynta ugu wanaagsan ee bini-aadamku sameeyo iyo fekerka ma caddaalad falaan waxa loogu yeero caddaaladda ee Baybalka.
Sharciga Ilaahay wuxuu qeexayaa dembiga
Waa maxay dembigu, micnaheedu waa ka soo horjeedda doonista Ilaah, waxaa lagu qeexi karaa kaliya asalka sharciga rabaani ah. Sharciga Ilaahay wuxuu muujinayaa dabeecadda Eebbe. Wuxuu dejiyaa caadooyinka dabeecadda aadamiga ee aan dembi lahayn. ... Mushahaarada dembiga, ayuu Bawlos qoray, inuu yahay dhimashada (Rooma 6:23). Isku soo duubista dembigaasi waxay ku jirtaa ciqaabta dilka waxay ku bilaabatay waalidkeenna hore Aadan iyo Xaawo. Bawlos wuxuu noo sheegayaa: ... sida dembigu dunida ugu soo galay nin [Aadan] iyo dhimashada xagga dembiga, sidaasaa dhimashadu u gaadhay dadka oo dhan maxaa yeelay kulligood way wada dembaabeen. (Rooma 5:12).
Kaliya Ilaahay ayaa na badbaadin kara
Mushaarka, ciqaabta dembigu waa geeri, kulligeen waan istaahilinnaa maxaa yeelay dhammaanteen waan dembaabnay. Ma jiraan wax aan keligeen ku qaban karno si aan uga fogaano dhimashada qaar. Ma yeeli karno Ilaah. Ma hayno wax aan ku siin karno. Xitaa shaqooyinka wanaagsan nagama badbaadin karaan masiirkayaga guud. Wax kastoo aan kaliga ku qaban karno ma beddeli karaan liidashadeena ruuxiga ah.
Xaalad xasaasi ah, laakiin dhinaca kale waxaan leenahay hubaal, rajo hubaal. Bawlos wuxuu warqad u qoray reer Rooma in aadamigu ku xiran yahay degenaansho la'aan iyaga la'aantood, laakiin kii soo gudbiyay, laakiin rajo leh (Rooma 8:20).
Ilaahay inaga badbaadi doono nafteenna. Waa maxay war wanaagsan! Bawlos wuxuu intaa raaciyay: ... maxaa yeelay abuurku sidoo kale wuxuu ka xorreyn doonaa addoonsiga la'aanta ka dhalanaysa xorriyadda cajiibka ah ee carruurta Ilaah (Aayadda 21). Haddaba aan si dhow u eegno ballanqaadka Ilaah ee badbaadada.
Ciise wuu inala heshiiyaa Ilaah
Qorshaha badbaadada Eebbe waxaa la aasaasay xitaa kahor intaan binu aadmiga la abuurin. Bilowgii dunida, Ciise Masiix, oo ah Wiilka Ilaah, wuxuu ahaa wanka allabaryo loo doortay (Muujintii 13:8). Butros wuxuu cadeynayaa in Masiixiyiinta lagu soo furan doono dhiig qaali ah oo Masiix, oo loo doortay kahor dunidanka (1 Butros 1: 18-20)
Ilaah wuxuu ku sifeeyay go'aankii Ilaah inuu ku bixiyo qurbaan dembi, inuu yahay ujeedo weligiis ah oo Ilaah ku fuliyay Rabbigeenna Ciise Masiix (Efesos 3:11). Waqtiyada soo socda, Ilaah wuxuu doonayay inuu ... muujiyo hodantinimada hodantin nimcadiisa ee wanaagiisa uu inoogu qabo xagga Ciise Masiix (Efesos 2:7).
Ciisihii reer Naasared, kii Ilaah ku yimid, wuu yimid oo dhexdeenna ku dhex jiray (Yooxanaa 1:14). Wuxuu qaatay bini-aadamka wuxuuna wadaagay baahiyaheena iyo walwalkeenna. Isaga waa loo tijaabiyey sidii annaga oo kale, laakiin isagu weli dembilaawayaal ahaa (Cibraaniyada 4:15). In kasta oo uu ahaa nin kaamil ah oo aan dembaabin, ayuu naftiisa u huray dembiyadeenna aawadood.
Waxaan baranay inuu Ciise dul saaray qoraalkeena ruuxiga ah (Kolosay 2:13 ilaa 14). Wuxuu soo furtay xisaabteenna dembiga si aan u noolaan karno. Ciise wuxuu u dhintay inuu na badbaadiyo!
Sababta Ilaah ee loo soo diray Ciise wuxuu si cad ugu muujiyey mid ka mid ah aayadaha Kitaabka Quduuska ah ee ugu caansan dunida Masiixiyiinta: waayo, Ilaah dunidan wuu jeclaa, inuu wiilkiisa keliya dhashay oo keliya, sidaas darteed in kuwa isaga rumaystaa aysan lumin, laakiin ay nolol weligeed ah helaan. leeyihiin (Yooxanaa 3:16).
Falkii Ciise ayaa ina badbaadiya
Ilaah wuxuu u soo diray Ciise dunida si uu u badbaadiyo dunidan isaga (Yooxanaa 3:17). Badbaadadeenna waxaa suurto gal ah oo keliya Ciise. ... badbaada mid kale ma jiro, oo ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka loo bixiyey oo aynu ku badbaadi doonno (Falimaha Rasuullada 4:12).
Qorshaha badbaadada Eebbe, waa inaan xaq ku helno oo aan Ilaah la heshiinno. Caddaaladdu way ka sii fog tahay cafiska dembiyada (oo lagu daro, si kastaba ha ahaatee). Ilaah wuxuu inaga badbaadiyaa dembiga wuxuuna inooga caawiyaa xoogga Ruuxa Quduuska ah inuu ina aamino, addeeco isaga oo aan jeclaano isaga.
Allabariiddii Ciise waa muujinta nimcada Eebbe ee furaysa dembiyada qofka oo baabi'isa ciqaabta dilka. Bawlos wuxuu qoray in xaqnimada mid keliya ay tahay xaq dadka oo dhan (nimcada Eebbe) ee keenta nolosha (Rooma 5:18).
La'aan Ciise allabari iyo nimcada Ilaah, waxaan ku sii jirnaa addoonsiga dembiga. Dhammaanteen dembiilayaal baan nahay, kulligeen waxaan la kulannaa ciqaabta dilka. Dembigu wuxuu inaga soocayaa Ilaah. Waxay abuurtaa derbi inaga dhexeeya Ilaah iyo innaga oo ay tahay in lagu jajabiyo nimcadiisa.
Sidee dembiga loo cambaareeyay
Qorshaha badbaadada Eebbe wuxuu doonayaa in dembiga la xukumo. Waxaan akhrinaa: Isagoo wiilkiisa u diraya qaab jidhkiisa hibeysan… [Ilaah] wuxuu cambaareeyay dembiga ku jira jidhka (Rooma 8:3). Diese Verdammung hat mehrere Dimensionen. Am Anfang stand unsere unausweichliche Sündenstrafe, die Verurteilung zum ewigen Tod. Dieses Todesurteil konnte nur durch ein vollkommenes Sündenopfer verdammt oder aufgehoben werden. Dies bewirkte Jesu Tod.
Bawlos wuxuu warqad u qoray Efesos in lagu soo nooleeyay Masiixa markii ay dembiyadoodii ku dhinteen (Efesos 2:5). Markaa jumlad muhiim ah, taas oo ay caddahay sida aan ku gaadho badbaadada: ... nimco ayaa lagu badbaadiyay ...; badbaadadu waxay ka timaadaa nimco kaligeed.
Waxaan hal mar, dembiga ku nahay, annaguna si caadi ah ayayn u dhintay, in kastoo aan ahayn jidhka, haddana weli waannu nool nahay. Kuwii xaq ka dhigay Ilaah xaq buu u yahay dhimashada jidhka, laakiin iyagu waa suuragal weligood inay weligood sii jiraan.
Bawlos wuxuu noogu sheegay Efesos 2: 8: Sababta oo ah nimcada waad ku badbaaddeen rumaysad, mana aha xagga xaggiisa: Hadiyadda Eebbe waa ... waxay la micno tahay inaad la heshiiso Ilaah. Dembigu wuxuu abuuraa kala fogeyn innaga iyo Ilaah. Caddaaladdu waxay meesha ka saartaa kala fogeynta waxayna noo horseedaysaa inaan xiriir dhow la lahaano Ilaah. Markaa waa laga badbaadiyey cawaaqib xumada dembiga. Waxaan ka badbaadnay adduun xiran. Waxaan wadaagnaa ... dabeecadda rabbaaniga ah waana ka baxnay ... damaca xun ee adduunka (2 Butros 1:4).
Marka laga hadlayo dadka sidaan oo kale xiriir ula leh Ilaah, Bawlos wuxuu yidhi: Hadda oo innaga xaq laynagu helay iimaan, nabad baynu la leennahay Eebahay dm-eh Eebaheenna
Ciise Masiix ... (Rooma 5:1).
Haddaba Masiixiyiintu hadda waxay ku nool yihiin nimco, oo aan dembiga ka badbaadin, laakiin waxay had iyo goor u horseedaa tawbadkeenka Ruuxa Quduuska ah. Yooxanaa wuxuu qoraa: Laakiin haddaan qiranno dembiyadeenna, isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan. (1 Yooxanaa 1:9).
Masiixiyiin ahaan, mar dambe ma yeelan doonno dhaqan caado leh. Saas ma aha, waxaan ku qaadeynaa midhaha ruuxa rabaani ah nolosheena (Galatiya 5: 22-23).
Bawlos wuxuu qoray: Sababtoo ah waxaynu nahay shaqadiisii, ee loo abuuray Ciise Masiix shuqullada wanaagsan ... (Efesos 2: 1 0). Caddaalad kama heli karno shaqooyinka wanaagsan. Dadku xaq bay u leeyihiin ... rumaynta Masiixa ee ma aha shaqada sharciga (Galatiya 2:16).
Waxaan sameyneynaa caddaalad ... annaga oo aan haysan shuqullada sharciga, iimaanka keliya (Rooma 3:28). Laakiin haddii aan ku soconno jidka Ilaahay, waxaan sidoo kale isku dayi doonnaa inaan isaga ka farxinno. Annagu ku badbaadi mayno wax qabadkeenna, laakiin Ilaah wuxuu ina siiyey badbaado si aannu u qabanno camallo wanaagsan.
Ma heli karno nimcada Eebbe. Wuu ina siinayaa. Badbaadadu ma aha wax aan kaga wada shaqeyn karno ficil bas ama shaqooyin diimeed. Nimcada Ilaah iyo naxariistiisa had iyo jeer waxay ahaanayaan kuwo aan istaahilin.
Bawlos wuxuu qoray inuu xaqnimadu ka timaado naxariistiisa Ilaah iyo jacaylka dadka (Tiitos 3: 4). Uma yimaado shuqullada cadaaladda ee aan qabanay, laakiin naxariistiisa (Aayadda 5).
Noqo ilmo Ilaah
Mar alla markii Ilaah na yeedhay oo aannu raaciay yeedhkii rumaysad iyo aaminaad, Ilaah wuxuu inaga dhigaa carruurtiisa. Halkan Bawlos wuxuu u adeegsanayaa ilmo korsashada tusaale ahaan inuu sharraxo ficillada nimcooyinka Eebbe: Waxaan helnaa ruux u eg ilmo [dad-ku-wareejin: Ruuxa carruurnimada] ... kaas oo aan ugu yeedhno: Abba, aabbe qaali ah! (Rooma 8:15). Sidaas baynu carruurta Ilaah u noqonnay, oo sidaasaynu dhaxalka u dhaxlay, oo waxaynu nahay kuwo dhaxla Ilaah iyo kuwo wax dhaxla ee Masiix (Aayadaha 16-17).
Ka hor intaanan helin nimcada, waxaan ku jirnay addoonsiga awoodaha adduunka (Galatiya 4:3). Ciise wuu na furaa si aan u helno carruurnimada (Aayadda 5). Bawlos wuxuu dhahay: Maxaa yeelay waxaad caruur tihiin haatan… adigu caruur ma tihid, laakiin waxaad tahay caruur. laakiin haddii ilmuhu yahay dhaxalka Ilaah (Aayadaha 6-7). Taasi waa ballanqaad cajiib ah. Waxaan noqon karnaa caruurtii uu korsaday Eebbe oo waxaan dhaxli karnaa nolosha weligeed ah. Ereyga Griigga ee caruurnimada ee ku jira Rooma 8:15 iyo Galatiya 4: 5 waa huiothesia. Bawlos ereygan ayuu u adeegsaday qaab gaar ah oo ka tarjumaya ku dhaqanka sharciga Roomaanka. Dunida Roomaanka oo aqristayaasheeda ku nooleyd, korsashada cunugga waxay leedahay micno gaar ah oo aysan had iyo jeer ku dhex laheyn dadka ay ku hoos nool yihiin Rooma.
Dunida Roomaanka iyo Griiga, korsashada waxay ahayd caado ka dhexdhacda fasalada bulshada sare. Ilmaha la korsaday waxaa si shakhsi ah u doortay reerku. Xuquuqda sharciga ah ayaa loo wareejiyay ilmaha. Waxaa loo adeegsaday sidii dhaxal ahaan.
Haddii ay ku soo korsadeen reer Rooma, xiriirka reerka cusub wuxuu ahaa mid sharci ahaan waajib ku ah. Ilmo korsashada ma aha oo kaliya inay keentay waajibaadka, laakiin sidoo kale waxay wareejisay xuquuqda qoyska. Korsashada ilmaha oo wakiil ka ah cunugga ayaa ahayd wax kama dambaysta ah, u gudbida qoyska cusub waxay ahayd mid aad u adag oo ilmaha korsanaya loola dhaqmay sidii ilmo bayooloji ah. Maadaama Ilaah weligiis yahay, Masiixiyiintii Roomaanka ayaa runtii fahmay inuu Bawlos doonayay inuu halkan wax uga sheego: Booskaaga guriga Ilaah waa weligiis.
Ilaah wuxuu doortaa inuu ina korsado si gaar ah oo keli keli ah. Xiriirkan cusub ee aan la leenahay Ilaah, kaas oo aan ku kasbanayno tan, waxaa muujiyay Ciise oo leh astaamo kale: Wadahadalka Nikodemos, wuxuu leeyahay waa inaan mar labaad dhalanaa (Yooxanaa 3:3).
Tani waa sida aan u noqon carruurta Ilaah. Johannes wuxuu noo sheegayaa: Bal eeg, waa maxay jacaylka aabbahayo ina tusay oo ah in loogu yeedho carruurta Ilaah oo annaguna aannu nahay! Taasi waa sababta dunidu ina ogeyn; maxaa yeelay, iyadu ma ay garanaynin isaga. Gacaliyayaalow, waxaan horeyba u nahay carruurta Ilaah; laakiin waxa aannu noqon doonnaa weli lama muujin. Laakiin waxaan ognahay haddii ay muuqato, inaan noqon doonno isaga oo kale; maxaa yeelay waxaan isaga ku arki doonnaa isaga siduu yahay (1 Yooxanaa 3: 1-2).
Laga soo bilaabo geerida ilaa dhimashola'aanta
Sidaas daraaddeed innagu waxaynu nahay carruurta Ilaah; laakiin weli ammaan ma leh. Jidhkeenna hadda waa in la beddelaa haddii aan rabno in aan helno nolosha weligeed ah. Jirka, jirka oo go'ay waa inuu beddelaa jidh weligiis ah oo aan dhammaanaynin.
1 Korintos 15 Bawlos wuxuu qoray: Laakiin qof ayaa waydiin kara: Sidee kuwii dhintay loo soo nooleyn doonaa oo jidh noocee ah bay ku imaan doonaan? (Aayadda 35). Jidhkeenna hadda waa jidh, boodh (Aayadaha 42 illaa 49). Hilibka iyo dhiiggu ma dhaxli karaan boqortooyada Ilaah, taasoo ah mid ruuxi ah oo weligeed ah (Aayadda 50). Sababtoo ah suuskaani waa inuu soo jiitaa isbadal la'aan, oo dhimashadani waa inay soo jiidataa waaritaan (Aayadda 53).
Isbeddelkan ugu dambeeya ma dhici doono ilaa sarakicidda, markii Ciise soo noqdo. Bawlos wuxuu sharraxay: Waxaan sugeynaa Badbaadiye, Rabbi Ciise Masiix, kan beddelaya jidhkeenna aan waxtarka lahayn, inuu noqdo jidhkiisa ammaanta leh (Filiboy 3:20 ilaa 21). Masiixiyiinta rumeeysan oo adeeca Ilaah wuxuu horey u leeyahay xuquuqaha madaniga ah ee jannada ku jira. Laakiin kaliya waan gartay markuu Masiixu soo noqday
tani waa kama dambeys; oo keliya markaa Masiixiyiintu waxay dhaxlaan dhimashola'aan iyo buuxinta boqortooyada Ilaah.
Sida aan ugu mahadcelin karno waa in Ilaah inaga dhigay kuwa ku habboon in aan dhaxalno quduusiinta iftiinka (Kolosay 1: 12). Ilaah wuxuu inaga badbaadiyey xoogga gudcurka wuxuuna ina geliyay boqortooyada wiilkiisa qaaliga ah (Aayadda 13).
Kuwa loo aqbalay boqortooyada Ilaah waxay ku raaxaysan karaan dhaxalka quduusiinta iftiinka ilaa ay sii wadaan aaminaada iyo addeecista Ilaah. Maxaa yeelay waxaynu ku badbaadnay nimcada Ilaah, aragtidiisa badbaadintu waa dhammaystiran tahay oo waa dhammaystiran tahay.
Bawlos wuxuu sharraxay: Haddii qof Masiixa ku jiro, waa abuur cusub; Dadkii hore way dhammaadeen, oo bal eega, cusubi wuxuu noqday (2 Korintos 5:17). Ilaah wuu ina shaabadeeyey iyo qalbiyadeenna sida
Ballan qaaday Ruuxa (2 Korintos 1:22). Qofka beddelay, ee hibada u leh ayaa durba abuur cusub abuuray.
Ku alla kii nimco ku hoos jiraa, wuxuu mar hore dhashay Ilaah. Ilaahay wuxuu siiyaa dadka rumaysta magiciisa awooda inay noqdaan carruurta Ilaah (Yooxanaa 1:12).
Bawlos wuxuu ku tilmaamay hadiyadaha Ilaah iyo wicitaanada kuwo aan laga fiirsan karin (Rooma 11:29, tarjumaadda dadka). Taasi waa sababtaas ayuu isaguna u oran kari waayey: ... Waxaan ku kalsoonahay kii ku bilaabay shaqadii wanaagsanaa ee idinka dhexaysay inuu dhammayn doono ilaa maalinta Ciise Masiix. (Filiboy 1:6).
Ninkii Ilaah u naxariisto had iyo goorba wuu turunturoodaa, Ilaahse aamin buu u yahay isaga. Qisadii wiilka prodigal (Luukos 15) wuxuu muujinayaa in Ilaah doortay oo loogu yeedhay uu weli sii ahaado carruurtiisa xitaa haddii ay dhacdo qalalaase. Ilaah wuxuu rajaynayaa in kuwa lugta galay ay gudaha galaan oo ay isaga ku soo noqdaan. Ma doonayo inuu dadka xukumo, wuxuu doonayaa inuu badbaadiyo.
Wiilkii prodigal ee Kitaabka Quduuska ah runtii wuu is-yaqaan. Wuxuu yidhi: Immisa qof ayaa shaqeeya oo aabbahay haystaa oo haysta kibis aad u badan, aniguna waan gaajooday; (Luukos 15:17). Ujeedadu waa cad tahay. Markuu wiilkii qaynuunka ahaa fahmay nacasnimadiisa, wuxuu ka qoomamooday wuuna soo noqday. Aabihiis wuu cafiyey. Siduu Ciise yidhi: Laakiin markuu weli fogaa, aabbihiis ayaa arkay isaga oo barooranaya; wuu orday oo qoortuu ku dhacay oo dhunkaday (Luukos 15:20). Sheekadu waxay tusinaysaa aaminka Eebbe ee carruurtiisa.
Wiilku wuxuu muujiyey is-hoosaysiin iyo aaminaad, wuu toobad keenay. Wuxuu yidhi: Aabbow, waxaan ku dembaabay jannada iyo hortaadaba; Kol dambe ma istaahilo in laygu yeedho wiilkaaga (Luukos 15:21).
Laakiin aabihii ma uusan dooneynin inuu maqlo taas wuxuuna u diyaariyey nin soo laabtay. Wuxuu yidhi wiilkaygu wuu dhintay wuuna soo noolaaday; wuu lumay oo waa la helay (Aayadda 32).
Hadduu Eebbe ina badbaadiyo, annagu waxaan u ahaan doonnaa carruurtiisa weligiis. Isagu wuu sii wadi doonaa inuu nala shaqeeyo ilaa aan si buuxda isaga ula midoobinno sarakicidda.
Hadiyadda nolosha weligeed ah
Nimcadiisa, Ilaah wuxuu ina siiyaa ballamaha ugu qaalisan uguna weyn (2 Butros 1:4). Iyaga ayaynu ku helnaa saami ... dabeecada rabbaaniga ah. Sirta nimcada Eebbe ayaa ku jirta
rajo nool oo lagu noolaado sarakicidda Ciise Masiix kuwii dhintay (1 Butros 1:3). Rajadani waa dhaxal aan laga adkaan karin oo jannada loogu hayo (Aayadda 4). Waqtiga xaadirka ah waxaan wali ku badbaadnay awooda ilaahay rumaysadka… ilaa farxadda diyaar u ah in la muujiyo daqiiqada ugu dambaysa (Aayadda 5).
Qorshaha badbaadada Eebbe ayaa ugu dambeyntii lagu dhammayn doonaa imaatinka labaad ee Ciise iyo sarakicidda kuwii dhintay. Kadib isbadal hordhac ah oo ka imanaya bini-aadamka oo u dhinta dhimanayaal ayaa dhacaya. Rasuul Yooxanaa wuxuu dhahay: Laakiin waan ognahay: haddii ay muuqato inaynu noqon doonno sidiisa oo kale; maxaa yeelay waxaan isaga ku arki doonnaa isaga siduu yahay (1 Yooxanaa 3:2).
Sarakicidda Masiixu wuxuu dammaanad ka qaadayaa in Ilaah ballanqaadkayaga nooga soo sarakicin doono kuwa dhintay. Bal eeg, waxaan kuu sheegayaa wax qarsoon, Bawlos ayaa qoray. Dhammaanteen ma wada dhiman doonno, laakiin dhammaanteen waa layna beddeli doonaa, isla markaana si dhakhso ah, isla markiiba ... kuwii dhintay ayaa mar labaad la sara kici doonaa lagamamaarmaan inaynu nahay, oo annaguna waannu beddeli doonnaa (1 Korintos 15: 51-52). Tani waxay dhacdaa sanqadha buunka ugu dambeeya, kahor intuusan Ciise soo noqon (Muujintii 11:15).
Ciise wuxuu ballan qaadayaa in qof kastoo isaga rumaystaa uu heli doono nolosha weligeed ah; Waan soo kicin doonaa maalinta ugu dambaysa, ayuu ballanqaaday (Yooxanaa 6:40).
Rasuul Bawlos wuxuu sharraxay: Sababtoo ah haddii aan rumeysan nahay inuu Ciise dhintay oo haddana soo sara kacay, Ilaah wuxuu sidoo kale ku hoggaamin doonaa kuwii isaga la seexday Ciise xagga Ciise (1 Tesaloniika 4:14). Mar labaad waqtiga imaatinka labaad ee Masiixa ayaa loola jeedaa. Bawlos wuxuu ku sii socdaa: Isaga qudhiisa, Sayidku, markuu amarka dhawaaqo ... samada ka soo deg ... oo kuwii dhintay Masiixa ee ku dhintay waa la soo sara kicin doonaa (Aayadda 16). Markaa kuwa weli nool oo Masiixa ku soo noqon doona ayaa iyaga lagu qaban doonaa daruuraha hawada, xagga Rabbiga; oo sidaasaynu had iyo goor Rabbiga ula joogi doonnaa (Aayadda 17).
Bawlos wuxuu weydiinayaa Masiixiyiinta: Haddaba midba midka kale ugu qalbi qabow erayadan (Aayadda 18). Iyo sabab wanaagsan. Sarakiciddu waa waqtiga kuwa nimcada hoos yimaadda ay heli doonaan dhimasho la'aan.
Abaal marintu waxay la socotaa Ciise
Erayadii Bawlos hore ayaa loo soo qaatay :. Sababta oo ah nimcadii bogsashada ee Ilaah ayaa dadka oo dhan u muuqatay (Tiitos 2: 11). Badbaadadani waa rajadii farxadda lahayd ee la soo furtay markii ammaanta Ilaaha weyn iyo Badbaadiyeheenna Ciise Masiix ay soo muuqdaan (Aayadda 13).
Sarakicidda weli waa mustaqbalka. Waxaan sugeynaa, waxaan rajeyneynaa, sidii Paul oo kale. Dhamaadka noloshiisa ayuu yiri: ... waa waqtigii aan maray (2 Timoteyos 4: 6). Wuxuu ogaa inuu daacad u ahaa Ilaah. Dagaalkii wanaagsanaa waan dagaalamay, oroddi waan dhammeeyey, iimaan baan qabtay ... (Aayadda 7). Wuxuu sugayay abaalmarintiisa: ... taajkii xaqnimada ee Rabbiga, xaakinka xaqa ahu uu i siin doono maalintaas, keli kuma aha laakiin waliba qof kasta oo jecel muuqaalkiisa (Aayadda 8).
Waqtigaas, Bawlos wuxuu leeyahay, Ciise wuxuu beddeli doonaa jidhkeenna micnihiisu ... inuu isagu noqon doono jidhkiisa ammaanta leh (Filiboy 3:21). Isbadal lagu sameeyo Ilaah, kan Masiixa ka sara kiciyey kuwii dhintay oo weliba jidhkiisa dhimanaya ku soo noolaan doona Ruuxiisa idinku dhex jira, (Rooma 8:11).
Haddii aan nahay carruurta Ilaah, waxaan nolosheenna diiradda saari doonnaa gebi ahaanba Ciise Masiix. Mowqifkeenu waa inuu ahaadaa tii Bawlos, kaasoo yidhi, wuxuu u arkaayay noloshiisii ​​hore inay wasakhaysan tahay si aan ugu guuleysto Masiixa ... Waxaan rabaa inaan aqoonsado isaga iyo xoogga sarakiciddiisa (Filiboy 3: 8, 10).
Bawlos wuxuu ogaa inuusan wali gaarin hadafkan. Waxaan ilaaway wixii ka dambeeya oo aan gaadhaa waxa halkaa yaal oo ugaarsadaa yoolalka horay loo sii dejiyey, qiimaha guusha ee yeedhitaanka jannada Eebbe ee ku jira Ciise Masiix (Aayadaha 13-14).
Abaalmarintan guuleysigu waa nolosha weligeed ah. Ku alla kii Ilaah u aqbalaa sidii aabbihiis ahaa oo jeclaaday isaga, oo isku halleeya oo jidkiisa gala, wuxuu weligiis ku sii noolaan doonaa Ilaah ammaanta (1 Butros 5: 1 0). Muujintii 21: 6-7 Eebbe wuxuu noo sheegayaa waxa masiirkeenu yahay: Waxaan siin doonaa kuwa oommanka ah oo ka hela biyaha nool. Oo kii guulaystaa wuxuu dhaxli doonaa waxyaalahan, oo anna waxaan isaga u ahaan doonaa Ilaah, isna wuxuu ii ahaan doonaa wiil.
Buug-yaraha Kaniisadda Adduunka ee Ilaah 1993